トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Horukon ongaphakeme-isethi sici, bona ngokusebenzisa indlela ngesikhathi
Ngo-computer, futhi isethi yokuthengisa, iyona bamba ihholo conserver wukuthi ungakwazi ukulawula yokubhadala. Njengoba isigaba ukunquma iphesenti wenkokhelo, ephezulu isethi, kulungiselelwa phakathi, kuthiwa izilungiselelo ongaphakeme ukuphi. Ngo, into eyenzeka esimweni ongaphakeme uma ufuna ukukhomba ngaphambi kwesikhathi, sizobheka ukuthi kukhona into enjalo ezifana. kulungiselelwa okuphansi yingoba kunezinhlobo ezingaphezu linombono wokuthi okuningi ukubona ngokusebenzisa kalula ngokulungiselelwa okusezingeni eliphezulu.
isibonelo, ayisekho ukuza ukufinyelela evamile, futhi ngokuvamile hhayi woza ukufinyelela ngisho amahora emifushane ukusebenza, ngokuvamile kulula ukuba ususe umfutho Atsurichi, ukufinyelela ukuboniswa kuyinto ukuchema kuzo kungabonwa nje into efanayo, futhi nokwethenjelwa ngokungazelelwe ukufinyelela ongaphakeme adonsela nangempela ngayibamba, ke izobonwa imicabango yabantu abaningi ezihlobene umphumela ukufinyelela. Uma ubheka ngale ndlela, ukulungiselelwa ongaphakeme ngokujwayelekile efana siyeza ngokuya ukuba nombono wokuthi kungaba azimisele ngokwengxenye ezihlobene ukukhiqizwa.
Khona-ke, izimpawu ukuthi kukhona ozayo obujwayelekile, ngisho noma izinkinga ezinkulu edonsa big hit, kalula donsa hit wenkokhelo ongaphakeme, wukuthi kukhona mkhuba okuthunyelwe-jackpot okungahambisani pullback emahoreni emifushane ukusebenza.
Ngaphezu kwalokho, esimweni izilungiselelo okusezingeni eliphezulu noma izilungiselelo Lesisemkhatsini, kodwa kwaba ukuthi kwanoma yiliphi isu ezifana ibhola ukusivumela kwenzeka ukuqala, ngesikhathi kulungiselelwa ongaphakeme, futhi yafinyelela ibhola eduze ekuqaleni ephambene, ukuqala ngempela ngaphandle kokufaka, kuba into kwenzeka ukuthi eliyaluzayo bezungeza.
Kodwa into enjalo, kubonakala ezinye izinto zenzeka ngempela, kuyinto ngokungenamibandela ngoba incike futhi shintsho nail, futhi zonke senzeka ukuqinisekisa kulungiselelwa ongaphakeme lapho, ekufezeni umbono okuphambene ukuthi akukwazi ezinhle kodwa abanye.